နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on September 9, 2014 at 11:07 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ ထသွားလာသွား စကားပြော တွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ စကားပြော တွေဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ စကားပြောကို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
Paul: Fine, thanks, oh, excuse me- here's my bus. Good-bye.
Don: Good bye.
အထက်က dialogue မှာ Paul ပြောတဲ့ "Hello" အစား "Good morning." "Good afternoon." စတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားလည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီစကားရပ်တွေ အားလုံး ပိုမိုလေးနက်တဲ့ သဘောရှိ တဲ့ formal စကားရပ် တွေဖြစ်တယ်။
ပြီးတော့ Paul ပြောတဲ့ "How are you?" ကိုအသံထွက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီ How နဲ့စတဲ့ မေးခွန်းတွေမှာ verb to be ဖြစ်တဲ့ are အပေါ်မှာ အသံကို stress ထည့်ပြီး ပြောရတယ်။ အလားတူဘဲ မေးခွန်းတွေမှာ verb to be ဟာ စာကြောင်း နောက်ဆုံးမှာ ရှိရင်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် non-demonstrative pronoun ရဲ့ အရှေ့မှာရှိနေရင်သော်လည်းကောင်း၊ question word မေးခွန်း စကားလုံး တာဝန်ကိုယူရတဲ့အခါ အဲဒီ verb to be အပေါ်မှာ stress ထည့်ပြောရတယ်။
ဥပမာ အောက်ပါ sentences တွေကိုကြည့်ရင် …
Where have you been? စသည်တို့မှ is, was, be, been တို့အပေါ် stress ထည့်ပြီး အသံထွက်ဖတ်ရတယ်။
အပေါ်က Situational dialogue မှာ John ပြောတဲ့ How are you? နှင့် Don ပြောတဲ့ How are you? မှာ မေးခွန်းက အတူတူ ဖြစ်သော်လည်း stress ထည့်ပြောရတဲ့ နေရာမတူပါဘူး။ John ပြောတဲ့ How are you? မှာ are အပေါ်မှာ stress ထည့်ပြောပြီး Don ပြန်ပြောတဲ့ How are you? မှာတော့ you အပေါ်မှာ stress ထည့်ပြောတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Don က John ကို responsive question အနေနဲ့ မေးတာဖြစ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် မေးခွန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လည်း နည်းနည်း ပြောင်းသွားပါတယ်။ သူတို့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို မြန်မာလို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
John: How are you? (ဟောင်အားယူ) နေကောင်းလား?
Don: Fine. Thank you. How are you? (ဟောင်အာယူး) ကောင်းပဗျာ ။ ခင်းဗျားကော?
တစ်ခါတစ်လေ ပြန်ဖြေသူက ဒီလိုလည်း ပြောနိုင်တယ်။ "Fine, thank you and you?"
You တစ်လုံးနဲ့တင် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံတော့ How are you လို့ အပြည့်အစုံ ပြောစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ you ကိုတော့ stress ထည့်ပြောရမယ်နော်။
English Conversation Lessons (Greetingavisitor/ Apologizing for a...
Permalink Reply by U Myint Soe on September 9, 2014 at 12:10
I hope that it will be most effective to me for learning English.
Permalink Reply by LynnZaw on November 19, 2014 at 14:43
Permalink Reply by Aung Win Naing on December 6, 2014 at 20:31
Permalink Reply by kyu kyu thin on December 7, 2014 at 11:31
Permalink Reply by Aung Soe Oo on February 10, 2015 at 21:30
Permalink Reply by hanthar on February 17, 2015 at 16:53
i want to learning about the grammer. can i getalink?
Permalink Reply by Tun Soe on February 20, 2015 at 12:48
Thank , I really enjoy this.
Permalink Reply by Htay Ei Ei Kyaw on April 10, 2015 at 15:53